Turkey:71 diyaaradood oo siday raashin ayaa gaadhay Qadar tan iyo bilowgii dhibaatada - Horn Future
Turkey:71 diyaaradood oo siday raashin ayaa gaadhay Qadar tan iyo bilowgii dhibaatada
Istanbul(Horn Future)-Wasiirka dhaqaalaha ee Turkey Nihat ayaa sheegay in Turkey ay u dirtay Qadar 5 kun oo tan oo raashin ah oo saarnaa 71 diyaaradood oo xamuul kuwaas oo u duulay Doxa tan iyo bilowgii dhibaatada Gacanka sida ay qortay wakaaladda wararka ee Anadolu.
Waxa wasiirku intaa ku daray hadal uu ka jeediyay shirka Golaha Dhoofinta ee Turkey oo ka dhacay magaaladda Istanbul in xamuulka badda ay si degdeg ah u bilaabi doonaan todobaadkan.
Turkey ayaa waxa ay qaadatay hindise ah in Qadar ay u dirto badeecadaha caanaha ka dib markii qoyska Sucuudigu joojiyay badeecadahan oo laga keeni jiray xagiisa.
Dhinaca kale madaxa Midowga Dhoofinta ee gobolka Galbeedka Mediterranean ka ee dalka Turkey, Mustafa Yazici ayaa sheegay in waxyaabaha Turkey ay u dhoofisay imaaradaha Gacanka badeecadaha ee ka ay kamid yihiin midhaha iyo khudaarta darayga ah ay si weyn sare ugu kacday muddooyinkii u dambeeyay gaar ahaan Sucuudiga iyo Qadar.
Masuulkan ayaa sheegay in Turkey midhaha iyo khudaarta ay u dhoofisay Qadar qiimaheedu uu yahay ($ 380 million) malyuun oo dollar muddadii u dhaxaysay bilowgii bishii May ilaa iyo 15 June, korodh ah 724% isla muddadaas sannadkii la soo dhaafay.
« Trump changes landmark Obama-era Cuba policy	» Sudan oo mar kale ku eedeeysay Khalifa Xaftar inuu taageero maleeshiyada hubaysan ee Darfur